मिसेस कल्चरलाई वाइवाइको साथ – Peacepokhara.com
मिसेस कल्चरलाई वाइवाइको साथ
पोखरा १८ माघ ।‘हाम्रो संस्कृति हाम्रो पहिचान, लोपन्मुख संस्कृति जोगाउने हाम्रो अभियान’ भन्ने मूल नाराका साथ स्थापित पुष्पाञ्जली फेशन एण्ड इभेन्ट प्रा.लि. द्वारा आयोजना गर्न गइरहेको दोस्रो मिसेस कल्चर नेपाल २०७४ लाई चौधरी गु्रपको उत्पादनमा रहेको वाइवाइ चाउचाउले मुख्य प्रायोजन गर्ने भएको छ ।
पोखरामा बिहीबार एक कार्यक्रमका वीच सि.जि. फुड्सका सिनिर म्यानेजर मिलन राणा र पुष्पाञ्जली फेशन एण्ड इभेन्ट प्रा.लि. अध्यक्ष शोभा गौतमले प्रायोजन सम्झोतामा हस्ताक्षेर गरेका हुन् । सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै राणाले मौलिक संस्कृतिको संरक्षण गर्ने र महिलाहरूलाई अगाडि बढाउने कार्यक्रमको उद्देश्य भएकोले आफुहरूले प्रायोजन गरेको बताए ।
वाइवाइले आफ्नो ग्राहकहरूलाई ‘वनौ आदर्श नागरिक’ भन्ने अभियान सञ्चालन गरिरहेको बेला यो सम्झौता गर्न पाउनु आफुहरूको लागि पनि गौरवको कुरा भएको अध्यक्ष गौतमले बताइन् । उनले जे उद्देश्यका साथ प्रायोजन वाइवाइले गरेको छ उक्त उद्देश्य प्रति पुष्पाञ्जली सधंै प्रतिवद्ध रहने बताइन् । यहि फागुन ५ गते पोखरा सभागृह हलमा फाइनल समारोह हुने कर्याक्रम संयोजक दिनेश शर्माले बताए ।
कसरी भइन् सन्नी पोर्न स्टार ?
peacepokhara 16 Nov 2015
पत्रकारिता संगसंगै अभिनय (फोटो फिचर)
peacepokhara 27 Jan 2015
दश बर्ष पछि कर्ण दास एउटा नयाँ आशाको साथमा ( म्यूजिक भिडियो सहित )
peacepokhara 29 Nov 2016